Ụlọ Oche Dị ọkụ Dị ọkụ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ụlọ Oche Dị ọkụ Dị ọkụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ụlọ Oche Dị ọkụ Dị ọkụ)
Ụlọ ihe nkiri Ụlọ ihe nkiri PET Egwuregwu Nkiri
Nkọwapụta ngwaahịa Igwe kpo oku a na-emecha kpochapu maka ebe obibi mposi kpo oku. 1. Mpempe akwụkwọ carbon carbon, nke na-ekpo ọkụ dị ọkụ. 2. N'ihe dị irè na-egbuke egbuke, ahụike ahụike na-arụ ọrụ. 3. Nzube maka oche ụlọ mposi.Ọbụrụ na ụlọ, ụlọ ọrụ, nkwari akụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, wdg. Ụdị ọ bụla dị. 4. Na-esi...
Ụlọ Oche Dị ọkụ Dị ọkụ Ụlọ oche dị ọkụ dị ọkụ Ụlọ ihe dị ọkụ Akpụkpọ anụ ọkụ ọkụ Ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ Ọkụ ọkụ ọkụ Ngwaọrụ ọkụ ọkụ Ụlọ mposi na oche dị ọkụ